Umvavanyi weendaba ezikhohlisayo i-Nu.nl ibaleka ngamabali e-coronavirus kunye nezihloko eziphambili: iMartin Vrijland
"Kutheni abo bacinga ngeyelenqe lamaDatshi begxeka uBill Gates nge-corona," yayisihloko sayo inqaku le.nl apho benze khona inzame yesibini yokufumana iqela elihlala likhula. Inyani yokubeka oku ibonisa ukuba iNetherlands evukayo iyaqala ukubeka isoyikiso kumandla.
Kwinqaku banxibelelanisa ngokucacileyo umntu wam kuzo zonke iintlobo zosasazo ezingelawulwayo, endizivezayo. Ixesha elininzi, enye imithombo yeendaba ayinikhathalelanga ngokupheleleyo, kodwa ngoku ukuba iwebhusayithi yam iya kuba nkulu kakhulu, ngoku emva koko bathumela into kwaye bangabi njalo kamva kwi-Nu.nl iza nenqaku elindibeka njengomhambisi weendaba ezingeyonyani. Ungabona ngqo ukuba basebenza phantsi kwesigqoko.
Hayi, andimgxeki uCorona kwiiGates! Leyo ithiyori yethiyori ngokwayo uNu.nl! Ngapha koko, bubuxoki beNu.nl!
Apha kule ndawo, kuphela kukutyalomali oluninzi uBill Gates akwenzayo okuhlukeneyo kuphuhliso lokugonyela kwaye iinkampani zemveliso ziye zaqaqanjiswa. Ezi yinyani ezinzima ezinokuthi zitshekishwe ngumntu wonke kwaye asiyidingi 'i-Ministry of Nu.nl inyaniso' ngaloo nto.
Emva koko babhekisa kwinqaku ngoJanuwari-phantse ekuqaleni kwale ngxaki ye-corona - apho ndibonisa khona imvume evela kwiPirbright Institute. Kwelo nqaku ndicacisa ukuba uninzi lwezitofu zokugonya ze-coronavirus zinelungelo elilodwa lomenzi kwaye nokuba uBill Gates ubonakala njengotyalomali emva kweli ziko.
IiCoronavirus (nazo) zakhiwe kwilabhoratri. Kuyinyani oko. Amalungelo obunikazi aphumle kuloo. Bakwenza oko ukwakha izitofu zokugonya. Oko akuthethi ukuba i-coronavirus covid-19 yangoku yinguqulelo yamalungelo abenzi. Oko akuthethi ukuba iziko lePirbright okanye uBill Gates unoxanduva lokuqhekeka kweCovid-19. Andithethanga lonto kwaye andikwazi ukuyithetha, kuba akukho bungqina bayo. Usenokubuza.
Endikwenzayo kukubuza imibuzo ebalulekileyo. Kwaye kuya kufuneka. Kuya kufuneka uqhubeke uzibuza izinto.
Umzekelo wombuzo obaluleke ngolu hlobo yindlela ekhulelweyo ngayo i-covid-19. Ngaba yintsholongwane eguquliweyo yendalo, yintsholongwane eguqulweyo ye-lab okanye ngaba yintsholongwane ngokwayilwa? Omnye umzekelo wombuzo onjalo yindlela ongena ngayo emzimbeni womntu (bonayo apha).
Amaziko anje ngeNu.nl afuna ukwenza uhlobo lweGeorge Orwell 1984 'yoMphathiswa weNyaniso' ekufuneka icinezele nayiphi na ingcinga kwaye ibonakala ngathi izabalazela ukuqinisekisa ukuba abantu banako ukulandela nje inyaniso enye: inyaniso yelizwe kunye "neengcali" zayo. Oku kuthetha ukuba awusenako ukubuza imibuzo ebuhlungu. Ungamamela kuphela "iingcali zikarhulumente". Ihamba ngaloo ndlela.
In kwinqaku evela kwi-28 uJanuwari Ndakhankanya ukuba uBill Gates uthe ngonyaka ka-2017 ukuba ubhubhane olandelayo unokwakheka kakuhle kwiscreen sekhompyuter.
Ukuba kuseNu.nl, asisenakwenza unxibelelwano. Oko "kukucinga ngokulenza iyelenqe". Kuya kufuneka uzivalele kwaye uginye nantoni na amajelo eendaba akujonga kuwe. Ngaphandle koko unokukhohlisa okanye uvukele ngokuchaseneyo (unesifo se-EYE). Hayi, hayi, hayi uNu.nl! Abantu kufuneka Kulungile gcina oko kunjalo! Abantu kufuneka Kulungile qhubeka ubuza imibuzo ebuhlungu. Eli lilungelo elisisiseko elizimeleyo.
Okomzuzu siphulukene nelungelo lokubuza imibuzo ebucayi, siphila phantsi kolawulo lobuzwilakhe.
I-Nu.nl ibonakala ngathi ifuna ukuba kungeniswe urhulumente ololu hlobo, kuba konke ukugxekwa kugxothwa "njengethiyori yoluyano". Ukugxekwa kwam kunxulunyaniswa nezinye iisayithi zemithombo yeendaba ezilawulwayo (ezi kwisingxobo selizwe kuba bayaphelelwa yimipu yokwenza izinto ngokwahlukileyo.
Ke kuyavakala ukuba bathethe ngeBill Gates. Akufanelanga ukuba uzibuze ukuba kutheni umntu oye waba usozigidigidi wagweba intetho yerhafu malunga nokuncitshiswa kwenani labantu ngogonyo? Akufanelanga ukuba uzibuze ukuba kutheni umntu efaka imali kuzo zonke iinkampani zogonyo; kutheni umntu enesicelo selungelo lokushicilela pa Iintlawulo ze-crypto ngengqondo yakho ndenze njalo? Awuvunyelwe ukuba uzibuze ukuba ngaba kukho i-ajenda emva kwayo?
Ayifanele ifumane nayiphi na i-crazier! Ke ukuba ngequbuliso ndineebhiliyoni ezimbalwa kwiakhawunti yam ngomso, imidiya yonke kunye nezopolitiko zisenyaweni zam kwaye imibuzo ebuhlungu ayifanelekanga? Ewe, loo ngxelo ibonakala ichanekile kwimeko kaBill Gates.
Kwilizwe elikhululekileyo, kufuneka siqhubeke nokubuza imibuzo. Kwilizwe elikhululekileyo, kufuneka sihlale sigxeka ubutyebi behlabathi. Kwilizwe elikhululekileyo, akufuneki sikhokelwe yimithombo yeendaba esepokothweni yabo bazizityebi.
I-Nu.nl yimali ethengiweyo epokothweni yemali enkulu. Nayiphi na inkcaso iyasuswa kwaye ime Umkhosi wemidiya yoluntu Ugcwalisa iimpendulo. Nabani na othetha into engavakaliyo ibali lakhe uyasuswa, njenge impendulo yam kwinqaku labo.
Shame kuwe Nu.nl!
Iwebhusayithi nepnieuws-checker.nl iya kutshatyalaliswa kweso sikhundla selizwe kwiimbono zakho zehlabathi
tags: ityala, khangela, ukujonga, iingcinga zobuqhetseba, iqhinga, iingcamango zobuqhetseba, umqhele, intlekele, intsholongwane ye-Corona, Gates, ukuseka, Martin, ntsimini, nu, nu.nl, patent, I-Pirbrght, I-Pirbright, iigonya, zokugonya, van, ilizwe elikhululekile, Nyaniso
24 Aprili 2020 kwi-09: 18
24 Aprili 2020 kwi-09: 46
INetherlands, ilizwe leemfihlakalo, iimfihlakalo ezininzi
kwaye apho 'abasebenzi abacocekileyo' banokuzifihla kakuhle iimfihlo. Ilungele ubuzwilakhe obuzolileyo, obufihlakeleyo.
24 Aprili 2020 kwi-10: 10
Funda amagqabantshintshi phantsi kweli nqaku le-NU.nl, a (ahlala esenza njalo ngeNU.nl) umdla ngakumbi kunqaku ngokwalo. Ukuba ufunda inani lokuphendula phantsi kwelo nqaku, unokubona ngokucacileyo ukuba (icandelo elikhulu kakhulu) lezi ziphumo zithunyelwe ngabantu abaqeshiweyo kunye nabantu abaqeshiweyo (okanye abantu abafanayo phantsi kweakhawunti eyahlukileyo) emva koko upose Ezi zinto zijongwayo ziphendulwa. Kucaca ngokwenyani ukuba wenza oku ixesha elide ngamanqaku abalulekileyo 'anomboniso' kwiindawo ezinjalo, kungekudala uya kubona iphethini ebonakalayo evela kwiziphumo (zihlala zivuma kwaye zibanzi ngakumbi kumbandela).
UVukani 36 wabhala wathi:
24 Aprili 2020 kwi-13: 13
Ewe kulungile, ndaye ndaphawula ukuba kukho i-troll ye-intanethi esebenzayo apha naphaya. Ndizikhetha kwangoko! Umntu uvumele ukuhendwa yividiyo abazakuphumelela ngayo kwaye zonke izicwangciso ziya kutyhilwa. Ummi oqhelekileyo akanakuze ayithethe loo nto. Zeziphi ezicwangciso?
Kwiphepha le-instagram baphosa ngokuthe ngcembe ngengcamango yokucinga okanye iyelenqe.
Ilusizi nge-MSM ukuba banomdla wokusebenza ngeetroli. Kuyabonakala ukuba basenoloyiko lokuba le nyaniso iya kubakho kwaye kuyacaca ukuba banokuzifihla ngenye indlela ngekhe babenze umzabalazo onjalo. Kuyasomeleza kuphela ukuba siqhubeke nokuvusa abantu!
24 Aprili 2020 kwi-16: 27
Ungathi i-MSM iyahambelana norhulumente! Ngamanye amaxesha uluntu lwenziwa ngathi aluvumelani kurhulumente. Oku ukuphazamiseka, ukudala ukudideka nokwenza imali. Kuba yile nto bayithandayo. Kukho intsebenzo esondelelene kakhulu neenkonzo zobuntlola ngokubeka esweni nokukhokela indlela yokuziphatha kwabantu ngokufumana ingxelo, njl. Njl. Bayeke amakhwenkwe ayeke, amakhoboka ayayithanda iZe. Ukongeza, ikhoboka eliqhelekileyo line-iq ephantsi kakhulu, ngokucacileyo isisiseko sokusinda iq.
24 Aprili 2020 kwi-16: 01
25 Aprili 2020 kwi-00: 36
ngokuqinisekileyo uFritsie akukho nto iphosakeleyo kuloo nto, qinisa nje izithupha
Kufuneka kubekho umbutho weentlekele ophakathi okhokelwa nguKhuselo ukujongana nengxaki ye-corona. 'IZiko leMiyalelo leSizwe' elinjalo kufuneka linikwe amagunya afikelela kude.
I-ps: Leiden sisiseko seMinerva
25 Aprili 2020 kwi-19: 00
ngokungathi abadlaleli indima ephambili kule nto yokusebenza kwe-corvid19, ilensi ye-cello yenye yemizekelo ye-megalomaniac socialopath.
24 Aprili 2020 kwi-16: 21
Kuyaphazama nokuba kunjalo ukuba simele ukumamela umzobo ngaphandle kwemvelaphi yezonyango okanye ulwazi. Kubaluleke ngakumbi ukufumana ukuba ungubani na.
24 Aprili 2020 kwi-21: 32
Kulapho ukuqala kancinci ukucoca kunye nokufumana i-mamafuckers, akukho abanye kuyo. Indlela yentlawulo yedijithali / imali.
26 Aprili 2020 kwi-11: 03
Ukuhlaselwa yeyona ndlela ikhuselekileyo
2 Meyi 2020 kwi-13: 39
mhlawumbi i-nu.nl kufuneka benze umsebenzi wabo wesikolo wobuntatheli, owu, ayilo ndima yabo leyo
Iimodeli zeDubious COVID
Iimodeli ezimbini eziphambili zisetyenziswa eNtshona ukusukela kusasazeka ukusasazeka kwe-coronavirus eYurophu nase-USA "ukuxela kwangaphambili" kunye nokuphendula ekusasazeni ukugula kwe-COVID-19. Omnye waphuhliswa kwi-Imperial College yaseLondon. Elesibini laqulunqwa, kugxininiswa kwiziphumo ze-USA, liZiko leWebhu leYunivesithi yaseWashington eleMetric Health and Evaluation (IHME) eSeattle, kufutshane nekhaya lomsunguli weMicrosoft uBill Gates. Yintoni embalwa eyaziyo kukuba omabini la maqela kufuneka abekhona ngenxa yenkxaso-mali yesiseko sokuxolelwa ekuhlawuleni irhafu esime ukuze enze amawaka ezigidi kwizitofu zogonyo kunye namanye amachiza ukunyanga i-coronavirus -Ingqonyela yeBill kunye neMelinda Gates.
UNeil Ferguson kunye neqela lakhe lemodeli kwiKholeji yase Imperi, ukongeza ekuxhasweni yi-WHO, bafumana izigidi kwiBill & Melinda Gates Foundation. UFerguson ubambe i-Vaccine Impact Modelling Consortium kwiKholeji yase-Imperi edwelise njengabaxhasi bayo ngemali i-Bill & Melinda Gates Foundation kunye ne-Gates-backed GAVI-umanyano logonyo. Ukusukela ngo-2006 ukuya ku-2018 i-Gates Foundation ityale imali eyi- $ 184,872,226.99 kwi-Ferguson's Imperi College modelling.
Ngokucacileyo, isiseko seGates saqala ukuthulula izigidi zabantu ekusebenzeni ngemodeli kaFerguson emva kokuba imeko yakhe intle kangaka yokungaqiniseki, nto leyo ekhokelele abanye ukuba uFerguson lelinye "isayensi lokuqasha" ukusebenza.
22 Meyi 2020 kwi-17: 52
« I-Luxands ithengisa iikhamera ezinokubona ngokusebenzisa (ii-coronavirus) iimaski zobuso
"Ukukhathalela kwabasebenzi ihlombe kunye nebhonasi yakho yokubheja", utshilo uFührer »
Utyelelo lulonke: 2.453.707